Nezvedu | NINGBO SURE PAPER CO., LTD
Ningbo chokwadi Paper Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2011, kunyanya vaiita mudzimba uye vatorwa rokutengesa chikafu giredhi bepa, zvemapuranga bepa, mukombe bepa, dzenzou kadhi, esimbi bepa, chinamirwa bepa etc. Parizvino, isu takasimbisa kwenguva refu mushandirapamwe hukama neanodarika chiuru emakambani ekudhinda pasi rese.
isu tine yakamira matanda zviuru zvisere pamwedzi, uye gumi nematanhatu michina inodikanwa senge yekucheka muchina, yekucheka muchina uye yekugadzira-muchina, chafariz shrinkage kurongedza muchina, otomatiki kurongedza muchina ect.
Saka zvinoreva kuti tinogona kuendesa odha yako mune pfupi pfupi nguva kuti usangane nezvinodiwa, uye isu tinogona kukuitira mapepa akaenzana akaenzana. pane mashoma fekitori anogona kukuitira iwe mumusika.
1: Tine kugona kuzadzisa zvese zvaunoda zvehukuru hwakasiyana uye huremu nenzira inokodzera pabepa.
2: pfupi zuva redeli.
4. agency (isu tinofanirwa kutenga anopfuura 1500 matani pamwedzi kubva kwavari kuti tigare chinzvimbo chemumiririri).
5: Zvatinogara tichiedza kuita kukubatsira kushandisa mari shoma kuti utore bepa remhando yepamusoro rakaenzaniswa nemusika wako.
6: Tine hupfumi hunodhura mumusika wemapepa, uye akawanda mapepa mhiri kwemakungwa anobva zvakare kumusika weChina, tinogona kukupa nhau nyowani dzepepa.
Ngativei shamwari yako yakatendeka uye tikubatsire kugadzirisa matambudziko ese ari munzira.
(1) Yepamusoro mhando, yepasi rose standard, ISO UYE FSC chitupa ect;
(2) Ruzivo rwakapfuma mubhizinesi repasi rese bhizinesi;
(3) OEM inogamuchirwa; inochinjika bepa muchina deckle, saizi yese inogona kugadzirwa;
(4) Yedu TOP yepasi rose VIP sevhisi;
(5) Kutsanya uye kwakarurama kotesheni;